China emeputa ụlọ na Cold & Manufacturer | Xinneng
A na-enye ụlọ ndị oyi na-atụ site n'aka onye ahịa nwere ogologo chọrọ, obosara, ịdị elu na iji okpomọkụ. Anyị ga-akwado ndozi ụlọ ime ụlọ oyi kwekọrọ na ọnọdụ okpomọkụ. Coldlọ oyi na-ajụ oyi na-ajụkarị na-eji 10 cm nnukwu ogwe, na nchekwa dị ala na nchekwa nchekwa na-ejikarị 12 cm ma ọ bụ 15 cm nnukwu ogwe. Okpukpo nke nchara ígwè nke onye na-emepụta ihe n'ozuzu karịa 0.4MM, na ụfụfụ ụfụfụ nke oghere ụlọ oyi bụ 38KG ~ 40KG / cubic mita kwa cubic mita dịka ọkọlọtọ mba.
A na-enye ụlọ ndị oyi na-atụ site n'aka onye ahịa nwere ogologo chọrọ, obosara, ịdị elu na iji okpomọkụ. Anyị ga-akwado ndozi ụlọ ime ụlọ oyi kwekọrọ na ọnọdụ okpomọkụ. Coldlọ oyi na-ajụ oyi na-ajụkarị na-eji 10 cm nnukwu ogwe, na nchekwa dị ala na nchekwa nchekwa na-ejikarị 12 cm ma ọ bụ 15 cm nnukwu ogwe. Okpukpo nke nchara ígwè nke onye na-emepụta ihe n'ozuzu karịa 0.4MM, na ụfụfụ ụfụfụ nke ogwe ụlọ oyi bụ 38KG ~ 40KG / cubic mita kwa cubic mita dịka ọkọlọtọ mba. Factorylọ ọrụ ahụ ga-eme ọnụ ụzọ dị iche iche dịka mkpa ndị ahịa si dị, ọ na-abụkarị ọnụ ụzọ ọkọlọtọ bụ 0.8m * 1.8m. Ọ bụrụ na onye ahịa enweghị ogo achọrọ, anyị ga-enwekwa ọnụ ụlọ ụlọ oyi maka ndị ahịa ịhọrọ.
Mpempe akwụkwọ ime ụlọ polyurethane na-eji polyurethane dị larịị dị ka ihe dị n'ime ime ụlọ oyi. Uru nke polyurethane bụ na arụmọrụ mkpuchi ọkụ dị ezigbo mma. Mpụga nke polyurethane ụlọ ime ụlọ oyi bụ nke SII, PVC agba nchara efere na igwe anaghị agba nchara. Ihe dị mkpa nke a bụ igbochi mgbasa okpomọkụ nke oyi ime ụlọ ahụ n'ihi nnukwu okpomọkụ dị iche n'etiti ime na n'èzí, si otú ahụ na-eme ka ụlọ oyi dịkwuo ike ịchekwa ma melite arụmọrụ nke ime ụlọ oyi.
Akụkụ nke Polyurethane Cold Room Panel
1. isiike polyurethane nwere obere kwes conductivity na ezi kwes arụmọrụ.
2. isiike polyurethane bụ mmiri-àmà na-enweghị mmiri.
3. isiike polyurethane ọkụ, ire ọkụ retardant, elu okpomọkụ na-eguzogide.
4. N'ihi arụmọrụ mkpuchi mkpuchi kachasị mma nke ogwe polyurethane, ọ nwere ike belata ọkpụrụkpụ nke envelopu ụlọ ma mee ka ime ụlọ ahụ dịkwuo elu.
5. Ike iguzogide deformation, adịghị mfe ịgbawa, mụ na mma imecha.
6. Polyurethane ihe nwere a anụ porosity Ọdịdị na bụ ihu ọma a mechiri emechi-cell Ọdịdị, nke ọ bụghị nanị nwere magburu onwe kwes mkpuchi arụmọrụ, ma na-nwere ezigbo ifriizi-gbazee iguzogide na ụda absorption ..
7. Nlekọta ọnụahịa zuru oke
Nkọwapụta nke oke nke ime ụlọ polyurethane oyi anyị bụ: 75.100.120.150.180, 200MM maka nhọrọ. Ihe nchebe kachasị bụ: embossed aluminum plate, steel steel plate, color zinc steel plate, salted steel plate, and plate floor plate. Anyị na-ejikarị efere aluminom embossed na igwe anaghị agba nchara.
Nye ndị ahịa ịhọrọ
Ozi Igwe Roomlọ Igwe Igwe Igwe:
Ogologo Obosara Ogologo CBM Okpomọkụ Ọnụ ọgụgụ
Ọkpụrụkpụ nke panel
Ihe mkpuchi nchara Panel
Agba agba, igwe anaghị agba nchara, kpaliri (ahaziri)
Ọkpụrụkpụ nke mkpuchi nchara mkpuchi
Mkpuchi Pu Sanwichi panel na cam-mkpọchi
Foto ndị ọzọ
Nke gara aga: Mgbapu ume diizel jenerato - Silent Type Generator - Xinneng
Osote: Ugboro ugwu Monoblock Refrigeration Unit
Oyi Ime ụlọ jụrụ oyi
Oyi ime ụlọ friza Units
Oyi Igwe Igwe Igwe Igwe